မန္တလေးကုန်ကားဂိတ် နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့တော့မည် | ဧရာဝတီ
မန္တလေးကုန်ကားဂိတ် နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့တော့မည်
မန်းသားလေး| January 15, 2013 | Hits:47,645
5 | | စွယ်တော်ကားကွင်း (ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ) အသစ် (ဓာတ်ပုံ – သြဘာ / ဧရာဝတီ)
မန္တလေးကျွဲဆည်ကန် ကားကွင်းအတွင်းရှိ ကုန်ကားဂိတ်များနှင့် ကုန်တင်ကားများကို စွယ်တော်ကားကွင်း (ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ) အသစ်သို့ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် အပြီးပြောင်းရွှေ့ကြရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အခွန်ဌာနမှ သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်တွင် လက်ရှိကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းမှ စွယ်တော်ကားကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ကုန်ကားဂိတ်ပိုင်ရှင်များမှာ အသင့်မဖြစ်သေးကြောင်း ကုန်ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် တဦးက ဆိုသည်။
“ပြောင်းရွှေ့ရမယ် ဆိုတာတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဂိတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ တိုက်ခန်းတွေက ဈေးကြီးနေတယ်။ အခုထိတိကျ ပြတ်သားတဲ့ဈေးနှုန်းလည်း အသေအချာ ထွက်မလာသေးဘူး။ တချို့ကလည်း တိုက်ခန်းတခန်းကို ကျပ် သိန်းငါးရာလို့ပြောတယ်။ အဲဒီလောက်ဆိုရင် ကျနော်တို့မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာ အပြီးပြောင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး”ဟု ရန်ကုန် – မူဆယ်သို့ ကုန်တင်ပို့ဆောင်နေသော ဂိတ်တခုမှမန်နေဂျာကို ရန်မင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အဝေးပြေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးက ယခု လာမည့် ဇန်နဝါရီ၁၇ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ဝန်နှင့် ကုန်တင်ကားသမားများ တွေ့ဆုံငြိနှိုင်းရေး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ အခန်းသစ် ဈေးများသည်မှန်းထားသည့် ဈေးထက်ထက်ဝက်ကျော် ကွာခြားနေကြောင်း၊ အခန်းဈေး များပြားလွန်းနေသောကြောင့် အများစုမှာ မတတ်နိုင်ကြကြောင်းဆိုသည်။
လက်ရှိကားကွင်းအသစ်မှာ ကားပါကင်နေရာ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ ဆိုင်ခန်းများ မလုံလောက်ခြင်းတို့ ရှိနေသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“လက်ရှိ ကုန်ကားဂိတ်တွေက၂၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။ အသင်းဝင်ထားတဲ့ ကားဂိတ်က၂၈၀ လောက်ရှိတာ။ သူတို့ ဆောက်ပေးတဲ့ ဆိုင်ခန်းက ၁၃၅ ခန်း။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ညှိနှိုင်းဖို့ လိုနေသေးတယ်”ဟု ဦးခင်မောင်အေးက ဆိုသည်။
ကုန်တင်ကားဂိတ်ပိုင်ရှင်များမှာ ဆိုင်ခန်းများကို ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရရှိရန် မျှော်လင့်လျှက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကားကွင်းအသစ်မှာ မန္တလေးမြို့အထွက် ၁၀ မိုင်ကျော်၌ ရှိသည့် စွယ်တော်ဘုရားဝင်း အရှေ့ဘက်တွင် တည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လားရှိုး– ရန်ကုန် လမ်းခွဲပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခင် ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းနှင့် ၇ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။
စွယ်တော် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းသည် ၆၂. ၀၈ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ဆိုင်ခန်းပေ ၆၀ x ၂၅ ပေ အကျယ်ရှိသည့် ကုန်ကားဂိတ် ၁၅၀၊ ပေ၂၀ x ပေ၄၀ ရှိ ကုန်ကားဂိတ် ၁၃၅ ခန်းတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်။
ဆိုင်ခန်းပေ ၆၀ x ၂၅ ပေအကျယ်ရှိသည့် ကုန်ကားဂိတ် ၁၅၀ ကို ငွေကျပ်သိန်း ၁၃၅၀ နှင့် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ပေ၂၀ x ပေ၄၀ ရှိ ကုန်ကားဂိတ် ၁၃၅ ခန်းကို ငွေကြေး သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအခွန်ဌာနမှ သိရသည်။
“ပေ၂၀ x ပေ၄၀ ရှိတဲ့ ကုန်ကားဂိတ် အခန်းတွေကို သိန်း ရာဂဏန်းလောက်နဲ့ပဲ ရောင်းချသွားမှာပါ။ အတိအကျ ကတော့ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေးမှာ ထွက်လာလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း ကုန်တင် ကားဂိတ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ခေါ်ယူညှိနှိုင်းတာ မျိုးတွေလည်း လုပ်သွားမှာပါ” ဟု အဆောက်အအုံနှင့် ကုန်ရုံဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ကုန်ကားဂိတ်ကို စွယ်တော် ကားကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရသည့်အတွက် မြို့တွင်းနှင့် ဝေးကွာသွားရာ ကုန်တင် ပို့ဆောင်ခများ မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အဝေးပြေး ကုန်တင်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များက ဆိုသည်။
“ခေါက်တိုဆွဲနေတဲ့ ယာဉ်အစီးရေ တထောင်ကျော်လောက်တော့ ရှိတယ်။ အဲဒီ ခေါက်တိုဆွဲတဲ့ယာဉ်တွေကို ခေါက်ရေ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ်ရတဲ့အခေါက်မှာ ကိုက်အောင် တောင်းရမှာပဲ။ နေရာကလည်း ဝေးသွားပြီဆိုတော့ အရင်ထက်စာရင် ကုန်စည်ခတွေ ဈေးပိုပေးရမယ် ထင်ပါတယ်” ဟုလိုက်ထရပ်ကားနှင့် ခေါက်တို ကုန်ပို့ ပြေးဆွဲနေသော ကားသမားတဦးက ပြောသည်။
ကျွဲဆည်ကန် ကားကွင်းဂိတ်မှာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သော ကားဂိတ်များနှင့် ခရီးသည်တင်ဆောင်သည့် ကားဂိတ်များ ပြည့်ကျပ်နေသည့်အတွက် ကုန်တင်ကားဂိတ်ကို ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာမြို့တွင်းမှ မြို့ပြင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးဟိုတယ် အများစု ကြယ်ပွင့်အဆင့် မသတ်မှတ်နိုင်သေး
နံပါတ်လှ မိုဘိုင်းဖုန်း မန္တလေးလေလံ ကျပ် သိန်း ၁၂၀၀ အမြတ်ရ
မန္တလေးတွင် လေပြင်းကျ၍ စက်လှေများနစ်မြုပ်
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ကျဆင်းမှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ အခွန်ထိခိုက်
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pnwara January 15, 2013 - 2:04 pm	အင်း- အရင်တုန်းက အတိုင်းပါလား-အခြေခံလုပ်သားပြည်သူ တွေ အတွက် နဲနဲလေးလောက် စဉ်းစားပေးစေချင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ငွေရှင် ကြေးရှင်တွေ အခု အခေါ် ခရိုနီ တွေ အကျိုးအမြတ်ရဘို့ - အကြောင်းပြ မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေကြတာကိုး။ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တဲ့ - လုပ်ကြ-လုပ်ကြ- ပြည်သူတွေ ဘ၀ ဘာမှ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး-
Reply	Salai Lian January 19, 2013 - 9:46 am	A wicked witch is alwaysawitch no matter what outfit she puts on,amilitary outfits or in civilian outfits. A witch is alwaysawitch. The witches who are in power today were witches in military outfits before they put on civilian outfits. They were so bad then, and they are so bad now. The outfits do not make them good people. When they smile for blood, we can see their bloodstained teeth. So scary. Burma is stillamillion miles away from genuine democracy. Burmese way to socialism failed. Burmese way to democracy is going nowhere too. Because monkeys who have no idea of democracy are on the thrones. Or monkeys who pretend to be humans are on the thrones.
Reply	မင်းမင်း January 27, 2013 - 10:59 pm	တိုက်ခန်းကဈေးအရမ်းမြင့်နေတော့ ကားခတွေလည်းဈေးတက်လာမယ်သဘောရှိတယ်။
Reply	nawfree January 30, 2013 - 11:50 am	မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှရမယ်ထင်တယ်နော်
Reply	minko February 3, 2013 - 3:49 pm	ကာတွန်းဆွဲတတ်သော ကာတွန်းပညာရှင်များ ကာတွန်းလေးနဲ့ မထိ တထိလေး သရောတော်တော် ပြောင်ချော်ချော် ဆွဲပြီး သက်ဆိုင်ရာ***ကြီးတွေ သိအောင် ကလိလိုက်ပါဦး–
ဌာန တခုမှာ စားပွဲပေါ် အရက်ပုလင်းများ-ကြက်ကြော်များ စားသောက်ရင်း -စကားပြောနေတဲ့ပုံ- တယောက်က ငြီးတွားနေရင်း- အလုပ်လဲ မယ်မယ်ရရ မရှိတော့ ပျင်းခြောက်ခြောက်နဲ့ ဗျာ- အပြင်းလဲပြေ ငွေလဲရ- လူလဲ မပင်ပမ်းတဲ့ အကြံလေးရှိရင်ပြောစမ်းပါဦး- လွယ်ပါတယ်ဗျ-အဝေးပြေး ကုန်တင်ကားဂိတ် နေပြောင်းမယ် အမိန့် ထုတ်လိုက်ပေါ့—-ဟု–
လျှပ်စစ်ရထား အိပ်မက် တကယ်ဖြစ်လာမှာလား
ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ တင်သွင်းသည့် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကြမ်း အငြင်းပွားမှုဖြစ်နေ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာ မေးခွန်းမေးရန်ရှိ
ထိုင်းနှင့် တရုတ် ဆက်သွယ်မည့် မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်မည်
မြေနီကုန်း နှင့် အင်းစိန် ခုံးကျော်တံတား ၂ စင်း တည်ဆောက်မည်
ကပရ နှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း၍ ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပိုင်း တချို့ ပျက်စီး